အပတ်စဉ်ကဏ္ဍများ, 15 ဒီဇင်ဘာ 2018
Twitter CEO မြန်မာခရီးမှတ်ချက် သင့်၊ မသင့် - စနေတိုက်ရိုက်လေလှိုင်းဆွေးနွေးခန်း
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်မှာ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်မှုနည်းနေရသေးတာ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ၊ ဒါနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ လက်ရှိမူဝါဒတွေကိုရော ထိထိရောက်ရောက် အကောင်အထည်ဖော်ပါရဲ့လား၊ WLB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး လွေးပိုးငယ်ကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
အိန္ဒိယရောက် Beyonce၊ Ghostbusters ထဲက ဒိုင်နိုဆော
အိန္ဒိယနိုင်ငံက အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ သမီးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ တတ်လာတဲ့ အမေရိကန် အဆိုတော် Beyonce၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်နာမည်နဲ့ ဒိုင်နိုဆော ပြခန်းကိုတော့ ကနေဒါမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတလွှားကထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့ အနုပညာအသိုင်းအ၀ိုင်းက သတင်းတွေကို မအေးသန္တာကျော် သက်တံရောင်သတင်းလွှာမှာ ပြောပြထားပါတယ်။
ဈေးကွက်မသေးတဲ့ တရုတ်က ပိုးဟပ်မွေးမြူရေး
ဈေးကွက်မသေးတဲ့ တရုတ်က ပိုးဟပ်မွေးမြူရေး #voaburmese #voasocial
ယီမင်ပြည်တွင်းစစ်မှာ ဆော်ဒီအာရေဗျ စစ်တပ် ပါဝင်ပတ်သက်မှုအပေါ် အမေရိကန်ထောက်ခံမှု အဆုံးသတ်မယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ ရေရှည်မဟာမိတ် ဆော်ဒီအပေါ် အထက်လွှတ်တော်ရဲ့ သမိုင်းဝင် ပြစ်တင်မှုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Michael Bowman ရဲ့ သတင်းကို မသိင်္ဂီထိုက်က တင်ပြထားပါတယ်။
သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush နိုင်ငံရေးအစဉ်အလာ
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ George H.W. Bush ဟာ ပြည်ပဆိုင်ရာမူဝါဒတွေမှာ အောင်မြင်မှုရခဲ့ပေမဲ့ ပြည်တွင်း သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာတော့ တင်းမာတဲ့ နိုင်ငံရေး လှုံ့ဆော်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေရှိပါတယ်။ Brian Padden သတင်းကို ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က တင်ပြထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အအေးဆုံးဒေသတစ်ခုမှာတော့ ရေခဲဟာ အသက်သွေးကြောတစ်ရပ်ပါ
Trumpရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှေ့နေဟောင်းဖြစ်သူ Michael Cohen ကို မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးရန်ပုံငွေ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ လွှတ်တော်ကို လိမ်ညာထွက်ဆိုမှုတို့အတွက် ဗုဒ္ဒဟူးနေ့က ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ Michael Cohen ကို ပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ Jim Malone ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ပြောပြမှာပါ။
အီရတ် ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေးနဲ့ အနာဂတ်
အီရတ် နေရာတော်တော်များများ သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ IS အစ္စလာမ်မစ် စစ်သွေးကြွတွေကို အနိုင်တိုက်နိုင်လိုက်ပြီဆိုပြီး ကြေညာခဲ့တာ တနှစ် ရှိသွားပါပြီ။ IS တွေ သိမ်းခဲ့တဲ့နေရာ အများအပြား ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး Mosul မြို့တော်လည်း အကြီးအကျယ်ပျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ Heahter Murdock သတင်းပေးပို့ထားတာကို နန်းလောင်ဝ် ပြောပြပါမယ်။